रमेश खरेल र सर्बेन्द्र खनालको घम्साघम्सी, कान्तिपुर र एपी वनको रस्साकस्सी - Khusi Limbu
Home - Blogs - रमेश खरेल र सर्बेन्द्र खनालको घम्साघम्सी, कान्तिपुर र एपी वनको रस्साकस्सी
यो हप्ता युट्युबमा दुई वटा ‘हेभीवेट’ कार्यक्रमहरु हेरियोः कान्तिपूर टेलिभिजनद्धारा प्रसारण हुने फायर साइड र एपी वन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने तमसोमा ज्योतिर्गमय । भुषण दहालको फायर साइडमा राजीनामापछि व्यक्तिगत जीवन बिताइरहेका पूर्व डीआइजी रमेश खरेलसंगको गफगाफ हेर्न पाइन्छ । उता टिकाराम यात्रीको तमसोमा ज्योतिर्गमयमा वर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालसंगको भलाकुसारी देख्न पाइन्छ । वहालवाला राष्ट्रसेवकलाई मुलधारको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा देखिनु अनपेक्षित र दुर्लभ क्षण हो । सेवारत आइजीपीलाई त्यसरी प्रत्यक्ष मिडियामा ल्याएर जनताका प्रश्नहरु प्रवाह गर्नु एपी वनको टेलिभिजनको सफलता हो ।
प्रहरी सेवामा रहँदा ‘कर्तब्यपरायण’, ‘निडर’ र ‘इमान्दार’ राष्ट्रसेवकको ख्याति कमाएका रमेश खरेलले आफुसंगैका सहकर्मी सर्वेन्द्र खनाललाई आइजीपी बने (बनाइए) पछि एकाएक राजीनामा दिए । उनी अहिले निजी जीवन बिताइरहेका छन् । सर्वेन्द्र खनाल भने आफ्नो सेवाको अन्तिम कालसम्म आइपुग्दा अपराधका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको चाङले थिचिएका छन् । यिनै बिषयहरुमा केन्द्रित रहेर टिकाराम यात्रीले खनाललाई जनता–जनार्दनबाट आएका प्रश्नहरु तेर्स्याएका छन् । उता भुषण दहालले भने खरेलसंग राजीनामा दिनुअघिका सन्दर्भ र दिएपछिका दैनन्दिनीका बारेमा जान्न चाहेका छन् ।
“क्षमता (competency) र योग्यता (meritocracy) भन्दापनि राजनैतिक दाउपेच र अनुग्रहको आधारमा उनी आइजीपी नियुक्त भएका हुन्” भन्ने अप्रत्यय सर्बेन्द्र खनाललाई लाउने गरिन्छ । त्यसको खण्डन गर्दै उक्त आरोपलाई असत्य सावित गर्ने मौका थियो खनालका लागि तर उनी धेरैजसो ठाउँमा चुकेका छन् । उनले बिषयबस्तुको गहिराईसम्म पुगेर उत्तर दिने प्रयास गरेको भएपनि आ-आफ्नो अन्तरवार्तामा खरेल नै खरो प्रस्तुत भएका छन् । ओहदामा रहँदा र नरहँदा ब्यक्तिको मिडियामा प्रस्तुत हुने शैली फरक हुन्छ नै । तर पनि अन्तरवार्तामा खरेल सदा झैं स्पस्टवक्ता, आत्मविस्वासी र वाकचतुर देखिन्छन् । यस्तो लाग्छ, आइजीपीको पोशाक र कुर्सीमा खनालभन्दा खरेल अरु बढी जम्नेथिए ।
प्रहरीको उच्स्थ पदका लागि पूर्व प्रतिस्पर्धीहरु खनाल र खरेल दुबै जना एकै पटक बेग्लाबेग्लै मिडियामा प्रस्तुत हुन संयोग मात्र होइन; यो खरेल र खनालबीचको छेडछाड त हो नै, यो फायर साइड र तमसोमा ज्योतिर्गमयबीचको दौड पनि हो; यो भुषण दहाल र टिकाराम यात्रीबीचको रस्साकस्सी पनि हो; अनि यो कान्तिपूर टेलिभिजन र एपी न्युज टेलिभिजनबीचको द्धन्द पनि हो ।
दुबै कार्यक्रमहरु सदा झैं रोचक, ज्ञानवर्द्धक र बिचारोत्तेज छन् । कार्यक्रमको बीचमा भुषण दहाल सोध्छन् – “रमेश खरेलजी के तपाईं अब राजनीति गर्नतिर लाग्नु हुन्छ ? कुन् पार्टीमा लाग्नुहुन्छ ?”
उता टिकाराम यात्रीले पनि प्रहरी महानिरिक्षक खनाललाई सोध्छन् – “निर्मला पन्त हत्याको छानविन के हुँदैछ ? के तपाई आफ्नो आफ्नो कार्यकालमै हत्यारा पत्ता लाग्नेछ ?”
फायर साइड हेर्नका लागि लिंक:
तमसोमा ज्योतिर्गमय हेर्नका लागि लिंक: